Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Africa Stephen Townsend oo qarsoodi ku yimid Muqdisho – Radio Daljir
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Africa Stephen Townsend oo qarsoodi ku yimid Muqdisho
Agoosto 8, 2019 12:06 g 0
Taliyaha cusub ee Ciidamada Mareykanka ee Africa Stephen Townsend ayaa arbacadii shalay booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada Muqdisho, isagoo ballan qaaday inuu sii wadi doono cadaadiska ka dhanka ah Al-Shabaab.
Towsend ayaa socdaalkiisa u horeeyay ku maraya Qaaradda Afrika, tan iyo markii uu la wareegay xilka Taliska AFRICOM dhamaadkii bishii July ee la soo dhaafay.
Waxaa uu shalay kula kulmay magaalada Muqdisho Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto iyo Hoggaanka Ciidamada Milateriga Soomaaliya.
War saxaafadeed ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Africa ayaa lagu sheegay in safarka Townsend uu yahay mid uu ku qiimeynayo xaalada Soomaaliya, kuna xoojinayo balan-qaadyada Taliska Mareykanka ee ku aadan Amniga gobolka.
“Waxaa iga go’an in aan wada shaqeyno oo aan horumariyo iskaashiga aan la leenahay Soomaaliya, Annaga oo kaashanayna Soomaaliya iyo saaxibada kale ee caalamiga ah, waxaan sii wadi doonaa cadaadis joogto ah ururada xagjirka ah ee rabshadaha wada. Cadaadiskan wuxuu abuuri doonaa fursado lagu gaaro horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo dheeri ah”ayuu yiri.
Haweeney rabtey in ay ismiidaamiso oo Baardheere lagu toogtay
Wasiirka Duulista hawada Puntland”Diyaaradda Itoobiyaan Airlines ma noqon doonto mid gudaha Puntland oo kaliya ka shaqaysa” ee waa mid caalami ah”